Iikholeji zeeKholeji ezingama-43 kunye neeNqweno zokuQala zikaJulayi
Hlola ezi zi-43 zezifundo eziphelelwa ngu-Julayi
Ukuba ufuna ukukhulisa amathuba akho ekufumaneni inkxaso-mali yekholeji, yenza okungakumbi ngoJulayi kunokwakha i-tan yakho kwaye ufumane ukulala. Isikolo sinokuthi singabikho kwiseshoni, kodwa iifiki zokubhalwa kweekhredithi zihlala zizayo.
Uza kufumana uluhlu olubanzi lweengxowa-mali kunye nemihla yokugqibela kaJulayi, kwaye indlela yodwa yokuphumelela imali ukufaka isicelo. Ngaphantsi kweesampulu zee-scholarship ezingama-43 eziphela ngoJulayi. Ezinye ziza kubafundi beekholeji zamanje, ngelixa ezinye ezininzi zivulekile kubafundi bezikolo eziphakamileyo. Amabhaso athathwe kwixabiso ukusuka kwi-$ 200 ukuya kwii-20,000 zamawaka. Ngomnye umfundi, uya kufumana iinqhagamshelo ngolwazi olongezelelweyo kwi-Cappex.com, iwebhusayithi ekhululekayo ehamba phambili enika iinkonzo zeklasi kunye neenkonzo zokufanisa. Unokufumana kwakhona abafundi abaninzi kwiCapepex.
01 ka 44
UmFundisi weFrench Bachelorate Scholarship
• Igalelo : $ 20,000
• Umgca wokugqibela: 7/1/17
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yabafundi basemaphumini abasebenza basefama abaphumelele ngunyaka omnye kwiikholeji okanye kwiyunivesithi. Ukuze afaneleke, abafaki-sicelo mababe nembali yamuva yentshukumo yomsebenzi wezolimo, kwaye babonise ukuphumelela kwezemfundo kunye neemfuno zemali.
UWilliam C. no-Anna Rose Chamberlain Memorial Scholarship
• Igalelo : $ 500
• Inkcazo: Le ngxowa yimiba yabafundi beCawa likaKristu. Ukuze afanelekele le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka bafune imfundo kubulungiseleli okanye njengabathunywa bevangeli okanye abafundisi abaqeqeshiwe beCawa yamaKristu. Okuphambili kunikezelwa kumalungu okanye angaphambili amalungu eGender Road Christian Church (owayesaziwa ngokuba yiCawa ye-Southeast Christian Church) e-Canal Winchester, eOhio.
04 we 44
I-Minority Scholarship Award ye-College of Freshmen
• Igalelo : $ 1,000
• Inkcazo: Le ngxowa-mali igosa labafundi abaphakamileyo esikolweni esiphakamileyo abakwenza ikholeji ekuwa. Ukuze afanelekele le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babe ngamalungu eqela elincinci elithintela kwi-yobunjineli yeekhemikhali, njenge-African American, isiSpanishi, iMative yaseMelika, okanye isiNtukazi sase-Alaska. Abafake izicelo mabacwangcise ukubhalisa kwiikholeji zeminyaka emine okanye iyunivesiti enika isayensi / degree yobunjineli. Abafaki zicelo bayakhuthazwa ukuba bakhethe iiklasi ezikhokelela kwinqanaba lobunjineli bemichiza.
05 ka 44
UFrank J. Richter uScholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali kubafundi bexesha elizeleyo beya kwiikholeji okanye kwiyunivesiti eqinisekisiweyo e-United States okanye eCanada. Okukhethiweyo kunikwe abafaki zicelo ababhalise kwintsimi yokuthutha. Abafaki-sicelo kufuneka babe se-level-level-stand stand or above in the semester fall.
Ama-AMVETS AmaLungu kaZwelonke Umsebenzi oNcedisayo Qala u-Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yimiba yangoku ye-AMVETS National Ladies Auxiliary ekhulayo, ukuhlaziywa, kunye / okanye ukubuyisela umsebenzi. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka bazalise ubuncinane i-semester / kwikota eyodwa yokufunda kwisikolo sobugcisa obuvunyelweyo, isikolo seshishini, iikholeji okanye iyunivesithi.
07 ka 44
I-AMVETS National Ladies Iikholeji yoNcediso lweKholeji
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yabafundi abakhulileyo besikolo abasemgangathweni abazalwa ngabantwana okanye abazukulu bamalungu akhoyo angama-AMVETS Ladies Auxiliary. Ukuze afanelekele le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka bamkelwe kwiikholeji okanye kwiyunivesithi.
08 ka 44
I-AMVETS National Ladies I-National Scholarship
• Igalelo : $ 750 ukuya ku-$ 1,000
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yamalungu angoku okanye abantwana okanye abazukulu bamalungu angoku, ii-AMVETS Ladies eziNcedisayo. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babe ubuncinane bonyaka wabo wesibini we-undergraduate study kwikholeji eyamkelwe okanye eyunivesithi.
IYA KUQINISWA IIMBINI, INC. I-Scholarship
• Igalelo : $ 200 ukuya kuma-500
• Inkcazo: Le ngxowa-mali kubafundi abakwii-grade ezine kwiikholeji (abaneminyaka engama-26) abahlala kwikhaya elilodwa lomzali kwi-Prince George's County, e-Anne Arundel County, eBaltimore County, okanye kwisixeko saseBaltimore, eMaldin. Ukuze afaneleke, abafaki-sicelo kufuneka babe ne-2.5 GPA okanye ngaphezulu kwaye bahlangabezane neziqinisekiso zengeniso yomzi (jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha).
Iprogram ye-AIM Academic Scholarship Programme
• Igalelo : $ 2,500
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yimiba yamanje ye-ATA kunye ne-AIM ababethekele iithagethi ezibhalisiweyo ezingama-500. Ukuze afanelekele le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babe ne-Minimum cumulative 3.2 GPA. Nceda ungenise iileta ezintathu zeenkcukacha kunye nesicatshulwa ngendlela ukudubula kuncedise ngayo kwimpumelelo yakho yemfundo.
11 ka 44
I-AIM Marksmanship Scholarship Programme
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yimiba yangoku ye-ATA kunye ne-AIM abaye bafezekisa inqanaba elithile lempumelelo kwimigqomo. Abahlaseli kuphela abanamaqondo angama-90 perecnt okanye aphezulu banako ukuthatha inxaxheba; Umyinge uya kuba kunye neenjongo zonke ze-ATA ezibhaliswe kuzo zonke iinqununu zonyaka we-2015 no-2016. Hambisa incoko ngesicelo sakho malunga nendlela impumelelo yakho kwintsimi yomgibe ibumba ngayo.
Iprogram ye-Integrated Scholarship Programme
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yimiba yangoku ye-ATA kunye ne-AIM phakathi kweminyaka eyi-16 no-23 ubudala. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka banikele ngokuzithandela ngokweenkonzo okanye kwiinkqubo ngaphandle kokufumana umvuzo. Abafake izicelo kufuneka bakwazi ukubhala ubuncinane beeyure ezingama-35 zenkonzo yenkonzo / iinzame zentliziyo yokuzithandela. Thumela iileta ezintathu zokubhaliweyo (kubandakanye nomnye umqeqeshi okanye elinye ilungu le-ATA kunye nomnye ovela kwathisha) kunye nesicatshulwa malunga nokuba uthatha inxaxheba njani ekuthandeni izibambiso ukuba ube ngumntu ojongene nesevisi okhoyo namhlanje.
I-Lakehouse Ukubuyiswa kweScholarship
• Inkcazo: Le ngxowaphi yabafundi beekholeji ababhaliswe kwiikholeji ezivunyelwe phantsi kweyona nto echaphazelekayo enxulumene nempilo yengqondo kunye / okanye ukunyangwa kweyeza. Abafake izicelo kufuneka bangenise incoko malunga nekamva labo elizayo. Jonga iwebhusayithi kwiikhokelo kunye neenkcukacha ezipheleleyo. Inqaku likaMgcini we-Cappex: Umhla wokugqibela wale ngxowa-mali ngowama-Julayi ka-2017.
I-Chris Massman Jikelele yeeScholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yenzelwa abafundi ababhaliswe kwiikholeji okanye iyunivesithi. Abafake izicelo kufuneka bangenise incoko ukuze baqwalaselwe. Jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha ezipheleleyo. Inqaku likaMgcini we-Cappex: Umhla wokugqibela wale ngxowa-mali ngowama-Julayi ka-2017.
I-ParadigmNY I-General Education Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yenzelwa abafundi ababhaliswe kwiikholeji okanye iyunivesithi. Abafake izicelo kufuneka bangenise isicatshulwa esicatshangelwayo. Jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha ezipheleleyo. Inqaku likaMgcini we-Cappex: Umhla wokugqibela wale ngxowa-mali ngowama-Julayi ka-2017.
Abafazi baMazwe ngamazwe kwi-Media Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali iphakamileyo ngabafundi abakhulileyo kunye nabafundi beekholeji abakhona abanomdla kwi-journalism. Isicelo siquka ukudala iphepha lewebhu elichaza ukufezekiswa komlobi-ntatheli owaziwayo. Iinkcukacha ezongezelelweyo ziyafumaneka kwiwebhusayithi.
I-ALBA iGeorge Watt Prize I-Contest Essay
• Igalelo : $ 250
• Inkcazo: Le ngxowaphi kubafundi bevela naphi na kwihlabathi abanomdla kwiMfazwe yaseSpeyin. Abafake izicelo kufuneka bangenise isicatshulwa okanye isahluko sesahluko malunga naluphi na uhlobo lweMfazwe Yesizwe yaseSpain, iimbambano zezopolitiko zehlabathi okanye iinkcubeko ezichasene ne-fascism kwiminyaka ye-1920 neye-1930, okanye iimbali zobomi kunye neminikelo yabantu baseMerika abalwa ngokuxhasa iSiphabliki yaseSpain ukususela ngo-1936 ukuya ku-1938. Iziphakamiso zingabhalwa ngesiSpanish okanye ngesiNgesi kwaye ziza kugwetywa ngesiseko sokuqala, umgangatho wophando kunye nokusebenza kwempikiswano okanye intetho. Omnye umfundi ophumelele ekufundeni, umfundi omnye we-graduate scholarship, kunye nomfundi oyedwa ofundiswa ngaphambili oza kufundiswa.
I-American Pavilion I-General Education Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yenzelwe abafundi beekholeji abhalisele kwiziko elivunyelweyo njengamanje. Ukufaka isicelo, abafake izicelo kufuneka bangenise isinco malunga neenjongo zabo zemfundo kunye nezicwangciso zekamva. Jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha ezipheleleyo. Inqaku likaMgcini we-Cappex: Umhla wokugqibela wale ngxowa-mali ngowama-Julayi ka-2017.
Umncintiswano wevidiyo ye-IP
• Igalelo : $ 5,000
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yabantu abaneminyaka engama-13 ubudala nangaphezulu abahlala e-United States, iSithili sase-Columbia, kunye nemimandla nezinto ze-United States. Ukufaka isicelo, abafaki-sicelo kufuneka benze ividiyo engekho ngaphezu kwemizuzwana engama-60 ubude ephendula imibuzo emine enikwe ngokumalunga neemveliso ezinelungelo lobunikazi. Abafaki-sicelo abaphakathi kweminyaka eyi-13 no-18 kufuneka babhalise ixesha elizeleyo kwizinga lesibini elivunyelweyo, kwiikholeji okanye kwisikolo sorhwebo. Abafaki-zicelo abaye bafundiswa ekhaya bayafaneleka ukuba bathathe inxaxheba. Nceda ubone iwebhusayithi yemigaqo epheleleyo yokungeniswa kunye nezikhokelo.
I-KB Delta Scholarship Programme
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yenzelwe abafundi beekholeji abhalisele kwiziko elivunyelweyo njengamanje. Abafake izicelo kufuneka bangenise isicatshulwa esicatshangelwayo. Jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha ezipheleleyo. Inqaku likaMgcini we-Cappex: Umhla wokugqibela wale ngxowa-mali ngowama-Julayi ka-2017.
I-Alpine Recovery Lodge yeScholarship Essay Contest
• Inkcazo: Ukufaka isicelo sale bhasari, abafundi mabazithumele isicatshulwa malunga nendlela ukuxhatshazwa kweziyobisi kuye kwabachaphazela njani ngqo. Jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha ezipheleleyo.
UJohn D. Uqhube i-OBE Scholarship ye-Petership Management Petership
• Igalelo : $ 2,000
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yabafundi bexesha elizeleyo ababhalise kwiiprogram zemfundo ezibandakanya ubunikazi bezilwanyana ezinoxanduva kwikharityhulam yabo. Abantu abaphishekela izifundo kwizilwanyana zezilwanyana, ubuchwephesha bezilwanyana, unyango lwezilwanyana, ukunakekelwa kwezilwanyana, ukuziphatha kwezilwanyana, ukulungiswa, kunye nokuqeqeshwa. Abafaki-sicelo kufuneka babhalise kwizinga okanye isatifikethi kwinkqubo kwisikolo se-US esisemthethweni. Amabhaso asekelwe kwiirekodi zemfundo kunye nemfundo efanelekileyo; amava oluntu kunye nobunini bezilwanyana ezinoxanduva; kunye neencwadana zokucebisa.
23 we 44
U-Eric Delson Memorial Scholarship
• Igalelo : $ 1,500 ukuya kwii-2,500 zamaRandi
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yikholeji, i-vocational, okanye yabafundi bezikolo ezizimeleyo ezixilongwa ngeklinikhi ene-hemophilia okanye isifo se-von Willebrand. Abafundi abathathu banikwa unyaka ngamnye kwiikholeji ezintsha okanye zangoku zeekholeji okanye abafundi basezikolweni zobugcisa, kwaye enye ingcali ibhalwa umfundi oya esikolweni sabucala, amabakala 7-12.
24 we 44
UDkt. Paul W. Vineyard Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mboleko yimihlali yabalandelayo kwinqanaba elinesibhozo kwi-Eastern Shore yaseMaldan: iKent, u-Queen Elizabeth, uTalbot, uCaroline, uDorchester, uSomerset, iWicomico kunye neWorterter. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafakizicelo kufuneka babe ngabafundi abaphumelele kwizikolo ezikarhulumente okanye ezizimeleyo kwaye zamkelwe okanye njengamanje ziya kwiprogram yococeko lwamazinyo esikhungweni seziko lesibini.
25 we 44
I-Texas Texas Paralegal Association Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowaphi yabemi bezomthetho baseCrosby, i-Floyd, i-Garza, iHale, iHockley, iMvana, iLubbock, i-Lynn, okanye iTerry County, eTexas. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babhalise ubuncinane ubuncinane kwiiyure ezingama-6 kwiprogram yomthetho evunyiweyo yiCandelo le-Bar Bar State of Texas Paralegal Division.
26 ka 44
Jikelele weNzululwazi noBunjineli
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yenzelwa abafundi ababhaliswe kwiikholeji okanye iyunivesithi. Ukufaka izicelo, abafake izicelo kufuneka bangenise inqaku malunga neenjongo zabo zemfundo kunye neenjongo emva kokugqweswa. Jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha ezipheleleyo. Inqaku likaMgcini we-Cappex: Umhla wokugqibela wale ngxowa-mali ngowama-Julayi ka-2017.
27 we 44
Ummandla we-Plaslegal Association we-Scholarship Fund
• Igalelo : $ 1,500
• Umgca wokugqibela: 7/7/17
• Inkcazo: Le ngxowaphi yabafundi baseDallas-Fort Worth indawo ababhalise kwiiprogram zomthetho kwelinye lala maziko afanelekayo: iCollin College, iKholeji yase-El Centro, iYunivesithi yaseMethodisti yaseMzantsi, i-Tarrant County College i-Northeast Campus, i-Texas A & M Commerce, i-Texas yamaKristu Yunivesithi, kunye neYunivesithi yaseTexas Wesleyan. Ukuze afanelekele le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babe ne-3.0 GPA ubuncinane kwaye babonise iimfuno zemali.
URobert L. noPauline H. Minton Memorial Scholarship Fund
• Umgca wokugqibela: 7/14/17
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yabantwana kunye nabaxhomekeke kwimithetho yabasebenzi bexesha elizeleyo beBattelle Memorial Institute e-Columbus, eOhio, abazali abangabodwa. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babhalise ngokupheleleyo okanye ixesha lexeshana kwiikholeji ezizimeleyo okanye ezingenzi-nzuzo kwikholeji yase-US
29 we 44
BrightLife I-Physical Therapist Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali kubafundi ababhaliswe ngokusesikweni kwiprogram yomsebenzi oqinisekisiweyo, unyango lomzimba okanye inkqubo yonyango loncedo lwezonyango. Ukuze bafaneleke, abafaki-sicelo kufuneka bazalise ubuncinane bonyaka omnye kwenkqubo yabo phambi komhla wokugqibela wesicelo, babe ne-GPA ubuncinane be-3.0, kwaye ube ngummi wase-US.
I-Jimmy West Employee Scholarship Fund
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yabasebenzi bexesha lesibini kunye nabantwana besibini abaqeshwa beColumbus Country Club eColumbus, eOhio. Abafake izicelo kufuneka babhalise ubuncinci bexeshana kwizikole zaseburhulumenteni okanye ezizimeleyo ezingekho nzuzo, eyunivesithi, okanye kwisikolo seminyaka emibili. Ukhetho luya kunikwa abasebenzi abasebenzela ikharityhulam yezemfundo ekuphatheni izibhedlele / ulawulo lweklinikhi / igumbi.
31 we 44
UDkt. "Cofa" Cowger Baseball Scholarship
• Umgca wokugqibela: 7/15/17
• Inkcazo: Le ngxowa-mali iphakamileyo abakhulileyo besikolo, ama-freshmen ekolishi, okanye iikholeji zeekholejini ezithatha inxaxheba kwi-baseball yaseKansas yaseLegion. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafaki-sicelo kufuneka babonise ukuba baphakathi okanye bangcono kunabantwana abaqhelekileyo abaye bamkelwa kwiikholeji ezincinci, eyunivesithi, okanye kwisikolo sorhwebo eKansas.
UPawulos Flaherty Athletic Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali i-Kansas high school elders, iikholeji zasekholeji, okanye iikholeji zeekholeji ezithatha inxaxheba kwindlela ethile yezemidlalo okanye i-athletics esikolweni esiphakeme. Ukuze afanelekele le ngxowa-mali, abafakizicelo mababe bhetele kunomyinge wezemfundo.
I-American Legion Baseball Scholarship
• Igalelo : $ 500 ukuya kwii-5,000 zamawaka
• Inkcazo: Le ngxowaphi yabafundi abadala abaphumelele abadlali kwiqela le-American Legion National Baseball. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babe kwiqela elibandakanyeka ne-American Legion Post kwaye banyulwe yi-Legion Coach okanye i-Team Manager.
34 we 44
• Inkcazo: Le ngxowa-mali kukuba ngabadlali bebhola bebhola ephakamileyo ye-baseball abakwi-American Legion National Baseball roster efihliweyo kwikomkhulu likazwelonke. Abafake izicelo kufuneka babe yinxalenye yeqela elichaphazelekayo ne-American Legion Post. I-scholarship ingasetyenziselwa ukuya kwisikolo esivunyelweyo, esikolweni sesibini esikolweni. Naliphi na umphathi weqela okanye umqeqeshi oyintloko weqela laseMelika Legion (I-Post-affiliated) angakhetha omnye umdlali ukuba acinge ngolu hlobo. Isebe ngalinye lekomiti yebhola lebhola lebhola liza kukhetha umdlali kwiSebe lakhe ukuba afumane le ngxowa-mali.
35 kwe 44
I-AAUW e-Douglas County kwiSebe leMfundo ePhakamileyo
Iikhokeli zexesha elizayo zoLwazi lwezoMthetho
• Umgca wokugqibela: 7/30/17
• Inkcazo: Le ngxowa-mali kubafundi ababhaliswe kwiikholeji yase-US njengamanje kwaye bavakalise i-OR enxulumene nomthetho omkhulu okanye ababhalise kwisikolo somthetho. Abafaki-zicelo kufuneka babonise ubugorha kwizifundo zakhe kunye nerekhodi yokunikela kwisikolo sakhe. Jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu.
37 kwi 44
Ukuxhasa i-STEM Scholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali kubafundi abaneenkcukacha eziphambili kwi-STEM (inzululwazi, iteknoloji, ubunjineli, okanye izibalo). Abafake izicelo kufuneka babe ne-3.0 GPA. Abafundi mabazithumele iimpendulo zegama eli-150 kwimibuto emihlanu. Inani lemali liya kuhlawulwa kwii-installments ezimbini zama-$ 500. Jonga iwebhusayithi ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu.
Umncintiswano weeNkcazo zeNtsapho ye-Platt
• Igalelo : $ 500 ukuya kwii-1,500 zamaRandi
• Umgca wokugqibela: 7/31/17
• Inkcazo: Umncintiswano weengqinisiso zengxowa-mali yenzelwe ngabafundi bexesha elizeleyo abafundele kwi-iikholeji zaseMelika okanye kwiiyunivesithi. Ukufaka izicelo, abafake izicelo kufuneka bangenise inqaku elithetha isihloko, "uLincoln kunye ne-Hard Hand of War." Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babhalise njengabafundi bexesha elizeleyo kwiikholeji ngexesha le-spring 2017 semester. Abafaki zicelo abadingeki ukuba babe ngabemi baseMerika ukuba basebenzise njengoko nje beya kwiikholeji yaseMelika okanye kwiyunivithi ngexesha lokufaneleka.
39 kwe 44
I-AAUW Indawo yokuHlabalalisa iLandelo leeLay Williams kunye noLeila Sulkes Scholarships
• Inkcazo: Ezi zifundo zenzelwe abafazi abahlali beli dolophu elandelayo eNew Jersey: iColts Neck, isiNgesi, i-Farmingdale, i-Freehold Borough, iLun Town Town, iHowwell, i-Manalapan, i-Marlboro okanye i-Morganville. Ukuze bakwazi ukufumana le ngxowa-mali, abafake izicelo kufuneka babe ubuncinane ubuneminyaka engama-25 ubudala kwaye babuyele ekolishi ukuze baqhube i-bachelor's degree or master degree. Abafake izicelo kufuneka bazalise ubuncinane ubuncwane abangama-60 kwi-bachelor degree okanye ubuncinane be-semester (okanye iikredithi ezili-12) kwiprogram ephumelele. Abafaki zicelo kufuneka bahlale bephakathi "B".
I-Quanta Picosecond Laser Yonyaka yoScholarship
• Inkcazo: Le ngxowa-mali ejoliswe ngokufanelekileyo kubafundi abaya kubhaliswa kwiikholeji okanye kwiyunivesiti eqinisekisiweyo kunyaka ozayo wesikolo. Ukuze bafaneleke, abafakizicelo kufuneka babe ne-3.0 GPA kwaye baqhubeke nemfundo yobunjineli, i-physics, iyeza, unesi, i-biology okanye enye insimi yesayensi yesayensi okanye yesendalo.
41 we 44
Ukuguqula i-IP Cloud Scholarship
• Igalelo : $ 500 ukuya kwii-1,000
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yenzelwa abafundi ababhaliswe ngokuzeleyo okanye kwixeshana kwiziko lemfundo ephakamileyo. Abafake izicelo mabacwangcise ukuqhubela phambili umsebenzi kwi-teknoloji okanye kwi-computer yesayensi. Abamkeli baya kukhethwa ngokusekelwe kwimfuno, imvelaphi yezemfundo kunye nobunkokeli obubonisiweyo. I-$ 500 kunye nedola elilodwa le-scholarship liya kunikwa.
42 kwi 44
URichard R. Tufenkian Scholarship
• Igalelo : $ 3,000
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yabafundi besikolo sase-Argenike. Ukuze bafaneleke, abafundi kufuneka baqhube izifundo ze-grade-full-time kwi-Fall 2017, ubuncinane ubunama-3.0 GPA, kwaye babonise inkonzo yoluntu yaseArmenian.
43 we 44
Delta Kappa Gamma-Omega Isahluko seGeauga County Grant
• Igalelo : $ 800
• Inkcazo: Le ngxowa-mali yenzelwa umfundi ophumeleleyo kwisikolo esiphakamileyo sase-Geauga County ongena kunyaka wakhe ophakamileyo kwizifundo zakuqala zezemfundo. Ukukhethwa kusekelwe kwiimfuno zezemali, i-GPA, isitatimenti sezizathu zesicelo, imisebenzi yangaphandle, kunye nodumo.
44 we 44
Yiyiphi i-Pell Grant?
1934 I-PGA Championship: I-Hitter efutshane ibetha i-Long-Hitter
Incwadi ethi 'A' ibhalwe njani ngesiFrentshi?
4 Imibuzo Yokubuza Xa Unayo I-Home School Doubts
Iipodcasts eziphezulu kwiintsholongwane zamaKristu
I-Real-Life Chimeras evela kwi-Annal of Paleontology
10 Umzobo we-Skaters Abaye bafa nge-AIDS
Ukusebenzisa abaCwangcisi beMifanekiso kwiMfundo eZodwa
IBond Angle Definition